Ikhosi isebenzisa iFilmora ukuhlela iividiyo- iiGeofumadas
Ikhaya/Izifundo zeArtGEO/Isifundo sisebenzisa iFilmora ukuhlela iividiyo
Isifundo sisebenzisa iFilmora ukuhlela iividiyo
Le yikhosi esebenzayo, ngokungathi uhlala phantsi nomhlobo akuxelele indlela yokusebenzisa iFilmora. Umqeqeshi ngexesha lokwenyani ubonisa indlela yokusebenzisa le nkqubo, zeziphi iindlela onokukhetha kuzo kwiimenyu kunye nendlela ephuhliswa ngayo iprojekthi. IFilora ngumhleli wevidiyo omangalisayo, ekulula ukuwusebenzisa, onomdla kwaye onamandla kakhulu. Inika amanqaku aphambili, ixesha lokulalelwayo kunye nevidiyo, ilayibrari yeziphumo, ilayibrari yotshintsho, umbala, izixhobo zomsindo kunye nezixhobo zombhalo.
Ikhosi ngokwendlela ye-AulaGEO eqala ekuqaleni, ichaza ukusebenza okuyisiseko kwesoftware, kwaye ngokuthe ngcembe ichaze izixhobo ezitsha kunye nokwenza umthambo osebenzayo. Ekugqibeleni iprojekthi iyaphuhliswa kusetyenziswa izakhono ezahlukeneyo zenkqubo.
Izifundo ezifunekayo kuqala?
Ikhosi isusela ekuqaleni
Inkqubo yokusebenza yeWindows / MAC
I-AulaGEO ibonelela ngale khosi ngolwimi español. Siyaqhubeka nokusebenza ukukunika olona qeqesho lubalaseleyo kwizifundo ezinxulumene noyilo kunye nobugcisa. Cofa nje kwikhonkco ukuya kwiwebhu kwaye ujonge umxholo wezifundo ngokweenkcukacha.
Iikhosi zoYilo loMzobo
Ikhosi ye-blender-imodeli yeSixeko kunye nembonakalo yomhlaba
Ikhosi yeAdobe Photoshop